200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Daawo sawirro cusub oo muujinaaya meydka Cali Cabdalla Saalax | Shabakada Warbaahinta Times
Daawo sawirro cusub oo muujinaaya meydka Cali Cabdalla Saalax
Dec 4, 2017 - jawaab
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa lagu dilay magaalada Sanca, sida lagu sheegay raadiyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Xuthiyiinta.
Telefishin ay Xuutiyiinta maamulaan oo lagu magacaabo al-Masirah ayaa baahiyay muuqaalka nin wasiirka arrimaha gudaha lagu sheegay oo shaacinaya in la afjaray dhibaatada maleeshiyada khiyaanada qaran sameysay, lana dilay hoggaamiyahooda”.
Muuqaal u eg maydka Saleh, oo lagu soo bandhigay warbaahinta bulshada ayaa muujinaya sida maleeyshiyaad hubaysan ay u isticmaaleen buste inay ku duubaan maydka si ay u saaraan gadaasha gaari xamuul ah.
Xubno ka tirsan Xisbiga Saalax ayaa sheegay in uu run yahay warka ku saabsan dilka madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen Mr Salah, kaddib duqeyn culus oo loo geystay gurigii uu ka degenaa magaalada Sanca.
Telefishin ay Xuutiyiinta maamulaan oo lagu magacaabo al-Masirah, TV-ga Al-Carabiya iyo Aljazeera ayaa si wada jira u shaaciyay geerida Cali Cabdala Saalax, inkastoo Aljazeera iyo Al-Carabiya ay mugdi yar glinayaan xiliga tabinta.
Maanta, salaadii duhur ka dib, guriga Cali Cabdalla Saalax ayaa la qarxiyay. Weli ma cadda in Saalax uu ku jiray guriga, balse saacado ka dib qaraxa, waxaa soo baxay wararka sheegaya in uu dhintay.
Taageerayaasha Saalax ayaa ku biiray kacdoonka Xuutiyiinta ee lagu qabsaday Sanca 2014. Horraantii sannadkii 2015, madaxweyne Haadi wuxuu ku qasbanaaday in uu Cadan u guuro, ka dibna Sacuudiga. faragelinta isbeheysiga Sacuudiga ayaan ah in Haadi dib loogu celiyo maamulka dalka Yaman.
Wararka ku saabsan dhimashada Salah ayaa u muuqda kuwo wali isku dhax yaacsan oo aan la hubin, laakiin haddana marka la eego muuqaalada lagu baahiyay baraha bulshada ayaa shaki badan galin kara nolasha madaxweynaha.
The post Daawo sawirro cusub oo muujinaaya meydka Cali Cabdalla Saalax appeared first on Caasimada Online.